तिनीहरू त्यै व्यक्तिलाई खोज्दै पृथ्वीलोकमा सोद्धै खोज्दै हिँड्दै कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको दिन उसैकी बहिनीलाई सोध्न पुगेछन् । तिमीहरू को हौ र ? किन त्यो व्यक्ति तिमीहरुलाई चाहियो ? भनेर बहिनीले भन्दा उनीहरुले आफ्नो परिचय दिएर भनेछन् किः– हामी यमदूत हौं ।
हामीलाई यमराजले आजै उसको प्राण लिएर आउन भनेर अह्राएर पठाउनुभएको हो र आजै उ मर्दैछ । यो कुरा सुनेर बहिनीले पनि नआत्तिईकन धैर्यसित भनी कि के उसलाई आजै नलान मिल्दैन र ? अहँ, मिल्दैन बरु छिटो भन उ कहाँ बस्छ ? केहीबेर सोच सम्झेर उसले भनी कि हे यमदूत हो ! त्यसो भए तिमीहरु एकैछिन यहाँ बस्तै गर म त्यो घरमा छ छैन हेरेर आउँछु भनेर त्यो केटी दौड्दै गई र आफ्ना दाजुलाई यमुनामा नुहाउन जान बिन्ति गरी । दाजुले पनि नभन्दै बहिनीले भने अनुसार नै हतार हतार गरेर यमुनामा गएर नुहाएर आयो । यता बहिनी भने गएर ति यमदूतसित कुरा गरिरहेकी थिइन् । हे यमदूत हो ! के तपाईंहरुले लिन आएकै मानिसलाई नै लानुपर्ने हो ?
यमदूत भन्छन् हे बाले ! हामीले त्यसैलाई नलगी हुँदैन । यमाज्ञा नै त्यस्तै छ । बालिकाले भनिन् हे यमदूत हो त्यो तपाईंले नाम लिएको व्यक्ति भनेको मेरो दाजु हो र म उसलाई मरेको हेर्न सक्तिन भन्दै उसले धेरै बिन्ति गरी तर उसको केही िलागेन । उसले रुँदै भनी हे यमदूत हो । ऊ मेरै दाजु हो । हे यमदूत हो ! तिमीहरू भनेको देवदूत पनि हौ । भरे कुर झुट्टा चाहिँ हुनुहुँदैन नि यस्ता कुरा बालिकाको सुनेर लौ हुन्छ तिमीले आफ्नो दाजुको सेवा गर्नलाई पनि यस्तो विघ्न भूमिका बाँध्नुपर्छ त हामीलाई न अल्मल्याऊ । त्यसो भए आज कार्तिकशुक्ल द्वितीया हो । मैले दाजुलाई छेकेको चिसो न ओभाउञ्जेल, मैल्े चढाएको फल न वैलाउञ्जेल, मैले फोरेको फल नकुहिञ्जेल र मैले लगाइदिएको माला नवैलाएसम्म तिमीहरुले पर्खिदिनु यत्ति सेवा गर्न यौटा माग राखें तिमीहरुले वचन दिए अनुसार मेरो यो माग अवश्यै पूरा गरी मेरा दाजुलाई लानु भन्दा यमदूतले भने, लौ बालिके छिटो गर । हुन्छ तेरो मागको समयसम्म हामी पर्खैला । यमदूतका कुरा सुनेर बहिनी आफ्ना दाजुको सेव गर्न थालिन् । यमदूत हेर्दै थिए, पर्खदै थिए । न त त्यो तेलको डोब नै सुकेको उनले देखे, न त ओखर फोरेको कुहेकै देखे, न त माला नै वौलायो माला मखमली पूmलको थियो वैलाएकै देखिँदैनथ्यो ।
कैयौं दिनसम्म पर्खे पनि उसले लगाइदिएको माला यथावत् रह्यो यमदूत छक्क परे । हामीलाई त यसले चौपट्टैसित पो ठगिछ त । अब कसे गर्ने ? भनेर यमदूत आपसमा मुखामुख गर्न थाले । उता यमराज पनि किन त्यो अपराधीलाई ल्याउन दूतले ढिलो गरे । यमराजलाई पनि आश्चर्य लागेर यमदूतलाई खोज्न भनेर निस्किए । आउँदै मात्र के थिए बाटैमा उनलाई उनैकी बहिनी यमुना लिन भनेर आउँदै थिईन् । बाटैमा दुवैको भेट भएछ । यमुनाले आफ्ना दाजुलाई धेरै वर्ष पछि भेट्न पाउँदा धेरै खुशी भएर भनिन् कि दाजु हामी दुवैको मन राख्न मेरो घरमा पाल्नुभई मलाई पनि दाजुको सेवा गर्न अवसर दिनुप¥यो । तर उता यमदूत हराएर खोज्न हिंडेको कुरा यमुनालाई के थाहा ? यमराजले भने हे बहिनी ! आज मेरा दूतहरु मत्र्यलोकमा गएका धेरै बेर भैसक्यो तिनीहरु अभैm नआएकाले म आपैंm खोज्न भनेर निस्केको हूँ । तिम्रो यो प्रस्तावलाई मैले मान्न सक्तिन ।
यमराजका यस्ता कुरा सुनेर यमुना भन्दछिन् हे भ्रात्रा ! के म हजुरकी बहिनी भएर जन्मेर मैले एकैदिन पनि दाजुसित कुरा गर्न र दुःखसुखको बारेमा मैले आफ्ना दाजुलाई केही भन्न पनि नपाउने ? कि मेरो घरमा नै दाजुभाइले जान नहुने हो ? दाजु शनिसित पनि भेट नभएको मेरो कैयौं वर्षसम्म लाग्न जाँदैमा वहाँलाई पनि मसित भेट्ने फुर्सद छैन । त्यसैले आज चाहिँ यमलोकका सबै काम विताएर भए पनि मेरो आतिथ्य स्वीकार्नै पर्छ ।
यसरी यमुनाको जिद्दीलाई यमराजले टार्न नसक्ता उनले आजको दिनमा जसले यमुनामा गएर नुहाउछ र शिखा बाँधेर १०८ गायत्री जपी दिदीबहिनीकोमा गएर दिदीबहिनीका साथमा बसेर मेरो र मेरी बहिनीका साथै माथि भनिएका देवताको पूजा गर्दछ भने त्यस्ता पुरुषले यमलोकको दर्शन गर्नुपर्दैन भने जुन नारीले यमुनामा गएर नुहाएर आफ्नो चुल्ठो बाटेर सम्पूर्ण सौभाग्यका सोह्र शृङ्गार गरेर आफ्नो नित्यकर्म गरेर आफ्ना दाजुभाइलाई साथमा लिएर मेरो र तिम्रो सभक्ति पूजा गरेर त्यही चन्दन अक्षता र पूmल लगाउलान् तिनले बाँचुञ्ज्याल विधवा हुनुपर्ने छैन र मरेपछि पनि यमलोकको दर्शन गर्नुपर्ने छैन । यो नै यमराजले पहिलोपटक यमुनाको घरमा भोजन गरेको दिन हुनाले यस दिनलाई यमद्वितीया भनेको हो ।
यमराजले युमुनासित भन्नुभयो जसले आजको दिनमा दिदीबहिनीकोम गएर अघि भने अनुसार पूूजा गरेर बहिनीका घरमा खाना खानुपर्छ र आपूmले सकेको सुवर्ण, वा दक्षिणा दिनुपर्छ । सके गहना र लुगाहरू दिनु नत्र दिदीबहिनीको प्रत्येक लागदछ । दिदीबहिनीलाई पनि सत्कारपूर्वक खाना खुवाउनुपर्छ । यदि आफ्ना दिदीबहिनी कोही नभए कुनै योग्य कन्यालाई बहिनी मान्दा पनि हुन्छ । तर त्यसरी मानेका दिदीबहिनीसित सदैव दिदी बहिनीकै स्थानमा राख्नुपर्छ । काका, बडाबाबु, मामा, पूmपुका छोरीहरुसित तिनलाई पूजन गरेर दान अथवा माथि भने अनुसारका सामान दिए पनि हुन्छ । त्यसरी दिँदा यश, धन, आयु, धर्म, कामको प्राप्ति हुन्छ । श्रीकृष्ण भगवान् युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ स्नेहपूर्वक यमराजले खाना खानुभयो त्यो दिन जो गएर आफ्नी बहिनीकोमा खाना खान्छ त्यो पुरुष बडे धनधान्यले युक्त यशस्वी हुनेगर्दछ ।